Ciyaaryahan Kooma Uu Ku Jiray Ka Soo Kacay Islamarkaana
Markii uu Rory Curtis ka soo kacay kooma uu ku jiray ma uusan garaneynin halka uu joogo, ma uusan ogeyn sida uu halkaas ku yimid. Ma uusan xasuusanin inuu ahaa weeraryahan da’ yar oo mustaqbal leh kuna jiray akadeemiga Manchester United, ma xasuusneyn shilkii koomada geliyay ee keentay inuu sinta ka burburo, xusulka ka jabo islamarkaana dhaawac uu ka soo gaaro maskaxda.
Markii uu indhaha kala qaaday waxa uu bilaabay inuu hadlo, luqad Faransiis sax ah ayaa afkiisa ka soo baxday, mar kaliya ee uu waligiis arkay luqada Faransiiska waa casharo uu iskuulkiisa ku qaatay oo uu goor hore iska ilaaway.
Qaabka uu ugu hadlay luqada Faransiiska waxay aheyd sida ay u hadlaan dadka u dhashay luqada, kalkaaliso isaga la joogtay oo Faransiis aheyd ayaa weydiisay aabihiisa dhinaca ay France ka degan yihiin iyadoo u qaadatay inuu Faransiis yahay.
Laakiin ku hadalkiisa luqada Faransiiska ma noqonin mid waarta oo sida riyadii oo kale ayay durbadiiba ka baaba’aday.
Rory Curtis ayaa ahaa weeraryahan ku jiray akadeemiga Manchester United, laakiin markii uu ku guuleysan waayay hamigiisa kubada cagta, waxa uu bilaabay inuu u ciyaaro kooxo yaryar isagoo sidoo kale ka shaqo bilaabay shirkad dhismo.
Waxa uu shil gaari garay bishii Agoosto 2014 iyadoo ay ay lix gaari isku duldhaceen, ma jirin qof kale oo sidiisa oo kale si halis ah u dhaawacmay.
Dab damiyaaasha waxay ku qaadatay 40 daqiiqo inay Curtis ka soo dhex saaraan gawaarida isdul fuulay.
Marka laga soo tago inuu luqad Faransiis la soo baxay markii uu ka soo kacay koomaha sidoo kale waxa uu ilaaway da’da uu jiro isagoo isku qaatay inuu yahay 10 jir, wuxuu hooyadiis weydiiyay halka uu joogo eeygiisa, waxaana lavatory sheegay inuu dhintay goor hore.
Haatan Rory Curtis waxa uu si buuxda uga soo kabsaday shilkii uu kooma ku galay, wuxuu iska ilaaway riyadiisii aheyd inuu ku xamaasho kubada cagta.
Waxa uu bartay sida timaha lavatory jaro ama lavatory xiiro isagoo dadkana bara, wuxuu dhawaan dib u bilaabay inuu asxaabtiisa ay isku xaafada yihiin kubad la ciyaaro.
axadle 2993 posts
Hope for Somaliland as UK, Netherlands and Denmark approve…
Hogamiyaha Puntland oo joojiyay dhisidda iyo…
Maxaa diirada lagu saaray kulankii Gudoomiye Mursal…